Chọọchị Setan - WRSP
Ulo oru SATAN
1930 (11 Eprel): Anton LaVey mụrụ na Chicago, Illinois.
1951: LaVey lụrụ Carole Lansing dị afọ iri na ise.
1952: Ada nwanyị LaVey, Karla mụrụ LaVey na Lansing.
1960: LaVey gbara alụkwaghịm Carole Lansing wee mepụta mmekọrịta na Diane Hegarty.
1964: Nwa nwanyị nke LaVey nke abụọ, Zeena Galatea, mụrụ LaVey na Hegarty.
1966: Anton LaVey guzobere Chọọchị Setan na San Francisco, California.
1967: Chọọchị Setan mere ememme agbamakwụkwọ Setan, nke mere ka ndị mmadụ nwee mmasị na mgbasa ozi.
1969: LaVey bipụtara ya Bible Setan, na-akọwa ụkpụrụ nke LaVeyan Satanism.
1975: Michael Aquino, onye bụbu onye isi na Chọọchị Setan, hapụrụ ụka ahụ wee chọta Templelọ Nsọ nke Set.
1980: LaVey na Diane Hegarty gbara alụkwaghịm.
1993: Otu nwa nwoke LaVey, Setan Xerxes Carnacki LaVey, mụrụ LaVey na Blanche Barton.
1997: Anton LaVey nwụrụ n'ihi ọrịa akpa ume, Blanche Barton ghọrọ Chọọchị nke Nnukwu Onye Nchụàjà nke Setan.
2001: Peter Gilmore ghọrọ Nnukwu Onye Nchụàjà nke Chọọchị Setan mgbe Barton rụsịrị.
2002: Peggy Nadramia ghọrọ Nnukwu Onye Nchụàjà nke Chọọchị Setan.
2006: Chọọchị Setan mere Mass nke mbụ ya na 40 afọ.
Anton Szandor LaVey [Foto dị n’aka nri] ka a mụrụ Howard Stanton Levey in
Chicago na Eprel 11, 1930 nye Michael Joseph Levey na Gertrude Coultron. Ha abụọ abụrụla ụmụ amaala America na 1900. N'oge na-adịghị anya a mụrụ ya, nne na nna LaVey kwagara na mpaghara San Francisco Bay ebe ọ nọrọ n'oge ọ bụ nwata. Ọ gara ụlọ akwụkwọ sekọndrị dị na Tamalpais na Mill Valley, California mana ọ kwụsịrị ịga akwụkwọ wee bụrụ nke gụrụ akwụkwọ nke onwe ya na ndụ ya (Knowles 2005). LaVey gosipụtara ikike dị egwu site na nwata ma mesịa jiri talent ndị ahụ dịka onye egwu, na-akpọ oku na ngwa n'ọtụtụ ebe iji kwado onwe ya n'ụzọ ego. Ọ zutere ma lụọ Carol iri na ise dị na 1950 na di na nwunye ahụ mụrụ nwa ya nwanyị mbụ, bụ Karla, afọ abụọ mgbe nke ahụ gasịrị. Ndị mụrụ LaVey kwere ka di na nwunye ahụ jiri ụlọ ha mere ebe obibi. Alụmdi na nwunye ahụ dịgidere afọ iri ruo 1959 mgbe LaVey zutere ma bụrụ onye Diane Hegarty jidere, bụ onye kọwara onwe ya dị ka nwanyị mgbaasị. Ọ gbara alụkwaghịm Lansing n'afọ na-esote wee malite mmekọrịta na Hegarty nke were afọ 25. Ọ bụ ezie na di na nwunye ahụ alụghị di ma ọ bụ nwunye, e mechara nye ha aha ụlọ nne na nna LaVey. Na 1964, Hegarty na LaVey mụrụ nwa nwanyị, [Image na nri] Zeena Galatea LaVey. Di na nwunye ahụ gbara alụkwaghịm na 1980. LaVey mechara nwee mmekọrịta na Blanche Barton, onye ghọrọ onye ikpeazụ ya wee mụọ ya otu nwa nwoke, Satan Xerxes Carnacki LaVey na 1993.
Oge mgbanwe dị ukwuu na ndụ na ọrụ LaVey mere na Eprel 30, 1966, Walpurgisnacht (ụbọchị ememme sitere na ọdịnala ndị ọgọ mmụọ nke a nabatara ọbịbịa nke oge opupu ihe ubi, mgbe a na-agba egwu na ọkụ). N'ụbọchị ahụ, a kọrọ na ọ kpụchara isi ya, yiri uwe ojii kpuchie onwe ya, wee kpọọ onwe ya Onye Isi Nchụàjà nke Chọọchị Setan na "Onye Ọchịchị Pope." LaVey kwuziri na 1966 ịbụ Anno Satanas, afọ mbụ nke Afọ Setan. Onye ekwuputara na onye isi nchu aja ahu gara biri na ulo nne na nna ya, nke jere kwa isi ulo uka nke Ekwensu. O tere ụlọ ahụ ihe na-acha oji na nke odo odo, a makwaara ya nke ọma dị ka “Houselọ Ojii.”
LaVey malitere ịmalite ọrụ ọhaneze mgbe ya na Kenneth Anger bụ onye na-eme ihe nkiri n'okpuruala, ọ haziri Ime Anwansi, otu ọgbakọ mkparịta ụka mgbaasị, yana nnukwu ụlọ ịgba egwu abalị akpọrọ "Ndị amoosu izu ike," ya na ndị uwe ojii yi uwe ndị amoosu na vampires, ebe ọ nọ kwalitere nkà ihe ọmụma ya. Chọọchị Setan natara nlezianya mgbasa ozi mba na 1967 mgbe LaVey na-elekọta ememe agbamakwụkwọ mbụ nke Setan, na-alụrụ onye nta akụkọ bụ John Raymond, na onye na-elekọta mmadụ na New York, bụ Judith Case. O mechara malite olili nke Setan, tinyere nke Edward Olsen, onye na-eje ozi na US Navy, na baptizim, gụnyere otu maka nwa ya nwanyị dị afọ atọ, Zeena. Na baptism nke Zeena LaVey nabatara ya na “uzo nke ochichiri:” N’aha nke Ekwensu, Lucifer a nabata nwada ohuru, Zeena, ihe ekere eke nke anwansi… n’aha Setan, anyi tinyere ukwu gi n’okporo aka ekpe Ya mere, anyị raara ndụ gị nye ịhụnanya, na agụụ mmekọahụ, ịkwa iko, na Setan, na ụzọ nke ọchịchịrị. Kẹle Zeena! Na-eto Setan! (Barton 1990: 90).
N'aka nke ya, LaVey malitere ịmepụta onye na-eme ihe ochie ma ghọọ onye mgbasa ozi (Raymond 1998). Ọ na-eduzi otu ememe mgbaasị nke Setan na onye otu nọ n'ọgbakọ ya, Lois Morgenstern, nke na-eje ozi dị ka ebe ịchụàjà; gbara ịnyịnya onye na-enyocha anya dị ka ụgbọ ala; tee mgbidi ụlọ ya oji; ma debe ụdị anụ ụlọ dị iche iche (tarantula, eke, na anụ ụlọ Nubian aha ya bụ Tolgare). N’afọ 1968, o wepụtara ọba egwu mbụ ya bụ “The Satanic Mass.” Ejikọtara ọtụtụ ndị a ma ama, gụnyere Jayne Mansfield, Sammy Davis Jr., King Diamond na Marilyn Manson na Chọọchị Setan n'oge a. LaVey nwetakwuru ihu ọha site na ịpụta oge niile na ụlọ ọrụ mgbasa ozi mba (Lee Magazine, Magazin Newsweeek, Time Magazine) na okwu telivishọn na-egosi (The Johnny Carson Show, The Phil Donahue Show).
Ọ bụ ezie na LaVey ghọrọ onye a ma ama, Chọọchị nke Setan emeghị ka ọ baa ọgaranya, ihe ọ na-ekwu enweghị. Site na etiti 1970s ya na nwunye ya bi n'ogo ogbenye, LaVey kwadobere mmesapụ aka nke ndị ezinụlọ na ndị na-akwado ya maka ọtụtụ oge ndụ ya niile. Isi ụlọ ọrụ nke Chọọchị Setan, bụ Black House, bụ nke e bibiri kpamkpam na 2001 site n'aka ezigbo ala ụlọ ahịa nke nweworo ikike. Mgbe ndị otu na mmasị ọha na eze na Chọọchị Setan jụrụ na 1970s, LaVey wepụrụ n'ihu ọha. (Boulware 1998; Lattin 1999). O weghaara oge na 1990s, na-eme ọtụtụ ọba egwu egwu, nke kachasị Setan na-ewe ezumike na 1995. Afọ abụọ mgbe e mesịrị, LaVey nwụrụ n'October 29 nke edere pulmonary (mmiri n'ime ngụgụ). Akwụkwọ mbụ nke akwụkwọ ọnwụ ahụ depụtara ụbọchị ọnwu ya dị ka October 31 (Halloween), ikekwe n'ịgbalị ịkwado onye mmụọ ọjọọ ya, mana e mesịrị mezie ya. N'oge ọ nwụrụ, ọ na-ede akwụkwọ Setan na-ekwu (1998), nke e bipụtara na posthumously na afọ na-eso ya ma nwee nkwupụta site n'aka Marilyn Manson.
Churchka nke Ekwensu mere Masslọ Nzukọ nke Ekwensu nke ọha na nke mbụ n'ime afọ 40 na Hollywood, California na June 6, 2006 (06/06/06), na akụkụ ụfọdụ na-akwa emo nkwenkwe ụgha ndị a ma ama banyere nọmba Ekwensu ("666"). E nyere otu narị akwụkwọ ịkpọ oku na nzuzo, nke dọtara ndị mgbasa ozi dị ukwuu.
Okpukpe Setan ejiriwo ụdị ụdị dị iche iche, bụ nke dị adị na nke e chepụtara, site n'akụkọ ihe mere eme mmadụ. Mkpesa nke ofufe a na-efe Setan nwere ike ịpụta na Europe n'oge Ọgbọ Azụ. Ụjọ nke ofufe Setan na-efe n'oge narị afọ nke 15th na-achụ nta, na akwụkwọ ntuziaka ndị Kraịst bụ ndị e mepụtara maka igosipụta na ịlụ ọgụ megide Setan, karịsịa Malleus Maleficarum (lee 1486) ma Compendium Maleficarum (lee 1620). Ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme na-egosi na ọ bụ òtù nzuzo nke Setan na ụlọ eze Louis Louis nke na-eduzi "Black Masses" ịkwa emo Katọlik. E nwekwara ndị satanists ole na ole na Europe na narị afọ nke iri na itoolu nke mere ka ụjọ na-atụ Setan. Na America, oge colonial New England nwetara oge nke ebubo amoosu na ịchụ nta na ndị amoosu. N'aka ihe gbasara ndi amoosu nke ndi ochichi, ihe omuma nke ekwensu ka emeworo n'akwukwo ntolite nile nke Amerika site na ndi nkpa nke ndi kwere ekwe nke kwere na Setan bu onye nadigh anya na ihe madu. Setan na-arụ ọrụ nke ịkọwa ihe ọjọọ na ọdachi, na-achọpụta okwukwe okwukwe, ma na-eme ka ịdị n'otu nke Ndị Kraịst sikwuo ike.
Enwere otutu uzo nke ofufe Setan nke oge a. Dị ka Peterson (2005: 424) si kwuo, Modernismism bụ nchịkọta nke echiche ndị otu dị iche iche gosipụtara n'ụzọ dị iche iche, yana agbanyeghị na otu abụọ ahụ na echiche ndị a nwere ike isiri ike ịbanye n'otu ụdị dị n'otu, ha na-egosipụtakarị nkà ihe ọmụma na n'ezie ochicho okpukpe. Peterson (2011: 223-24) na-amata ọdịiche atọ dị iche iche nke "Satanic milieu:" ndị na-arụ ọrụ esoteric, na ndị nwere ezi uche. Okpukpe Setan na-emegide agbụrụ “na-emegide ọha mmadụ, kama ọ bụ n'ụzọ na-ekwughachi echiche ndị Kraịst bụ isi nke ihe ọjọọ, na-eme ka ọ kwekọọ n'ọnọdụ ndị Kraịst. Satan, bụ Ekwensu, na Okpukpe Setan nwa na-eto eto ma ọ bụ nke na-emegide mmekọrịta nke imebi iwu ma 'ibi ndụ' nke akụkọ ifo. Okpukpe okpukpe nke Esoteric na-agbaso usoro mmụta okpukpe ma na-eji ọdịnala esoteric nke Paganism, Western Esotericism, Buddha na Hindu, na ndị ọzọ, iji mepụta okpukpe nke ime onwe ya. ” N'ikpeazụ, ofufe Setan nke nwere ezi uche “bụ Epicureanism ekweghị na Chineke, na-ekweghị ekwe. Satan iji bụrụ ihe nnọchianya nke nnupu isi, nke mmadu, aru na ike, na Okpukpe Setan ihe omuma ihe omuma kachasi nma maka 'ndi ozo'; okwu na-atọ ụtọ bụ ihe dị ndụ na ndụ dị mkpa. ”
Chọọchị nke Setan na-anọchite anya òtù Setan nke a maara nke ọma. Ntọala nke ozizi nke Chọọchị Setan bụ hụrụ na Anton LaVey's Bible Setan , bipụtara na 1969. Na Bible Setan ghọrọ ngwa ahịa kachasị mma ma nọgide na mbipụta ya kemgbe 1969. Ndị ahịa ahịa kwụsịrị, akwụkwọ ahụ ka bụ isi mmalite n'etiti ọtụtụ ndị ofufe Setan. Agbanyeghị, LaVey bipụtara ọtụtụ akwụkwọ ndị ọzọ na-emepekwa ụzọ ọgụgụ isi ya. Na Amoosu zuru ezu E bipụtara na 1971 (ma wepụta ya ọzọ na 1989 dị ka The Satanic Witch). Akwụkwọ a na-enye ntuziaka banyere iji obere anwansi iji duhie ndị ọzọ iji mezuo ebumnuche nke onwe. Amụma nke Ekwensu (1972) na-akọwa ọtụtụ emume satan nke ọ chọpụtara n'ọdịbendị gburugburu ụwa na-ezube iji gbakwunye Bible Setan. Mpịakọta abụọ nke ọzọ bụ Akwụkwọ Mgbaafọ Ekwensu (1992) na Setan Na-ekwu Okwu (1998). LaVey kesara echiche ya site n'oge ụka, Uwe Nkpuchi, nke mesịrị ghọọ Ọkụ ojii.
Echiche maka Bible Setan ọ dị ka ọ sitere n'aka onye nchịkọta ihe nnweta na Avon Books bụ onye chere na e nwere ahịa bara uru maka akwụkwọ maka nkà ihe ọmụma Setan. Onye nchịkọta akụkọ ahụ bịakwutere LaVey, onye chịkọtara okwu nkuzi ya na ihe omume ya wee jikọta ya na akwụkwọ. O doro anya na ọtụtụ ndị edemede ndị ọzọ nwere ọgụgụ isi LaVey. N'ime ndị kasị dị ịrịba ama bụ Ikike Kwesịrị Ekwesị, akwukwo ndi Darwinist nke gbara na 1896 nke Ragnar Redbeard dere (nke ana-kpo aha ya); Oge Aleister Crowley, Equinox ; John Dee si "Enochian Igodo;" na Ayn Rand's Atlas Shrugged (1957) (Schreck na Schreck 1998).
N'akwụkwọ ya, ihe ka ọtụtụ Bible Setan, Anton LaVey malitere na mbido na mmadu bu anumanu na ndu Darwin maka nlanarita na ndu nke ike kachasi mejuputara iwu nke okike. Okpukpe nke LaVeyan na-akwado nkwenkwe ya na ezi uche na ịnakwere iwu sayensị nke sayensị. N'ezie, LaVey na-ekwusi ike na ọ dịghị chi dị elu ma ọ bụ ụkpụrụ omume. Dị ka Magus Peter Gilmore si chịkọta Chọọchị nke ọnọdụ Setan (Shankbone 2007): “Okpukpe Setan malitere na ekweghị na Chineke. Anyị ga-ebido n’eluigwe na ụwa sị, “Ọ gbasaghị m. O dighi Chineke di, Ekwensu adighi. Ọ dịghị onye chọrọ ịma! ” Ya mere, ị ga-ekpebi ihe ga-etinye onwe gị n'etiti etiti ụwa gị… .Ya mere site n'ime ka onwe gị bụrụ isi ndụ gị, ị bụ Chineke nke gị. Site n'ịbụ Chineke gị, ọ ga-eme ka ị nwee ike ikpebi ihe ị ga-eme. ”
N'otu aka ahụ, Setan abụghị ihe dị adị kama ọ bụ akara ngosi ma ọ bụ akara ngosi nke ịnakwere mmadụ na ọdịmma onwe ya na ịjụ njikwa ụlọ ọrụ, ọkachasị okpukpe. Ekwensu si otú a gosipụta ezigbo ọdịdị ụmụ mmadụ nwere. N'otu oge ahụ, La Vey na-ekwusi ike na ụmụ mmadụ nwere nchekwa nke ike ha nwere ike ịchịkwa yana na ozugbo ewepụtara nwere ike ime ụmụ mmadụ chi. Otú ọ dị, “ike anwansi” ndị a bụ nnọọ ikike sitere n'okike nke sayensị na-achọpụta. Dị ka Chọọchị nke Setan Magus, Peter H. Gilmore si kwuo, ndị na-efe Setan ekwenyeghi n'okike, na Chukwu ma Ekwensu. Nye Setan, ọ bụ Chineke nke ya. Stan bu akara nke mmadu bi dika mpako ya. Ihe bu eziokwu n’azu Setan bu nnuku ikike mbido ozizi nduhie nke juputara n’ihe nile ekere uwa n’enye ayi ndu na igbasa nkpuru ihe nile di ndu. Setan abụghị ihe doro anya nke a ga-efe ofufe, kama ọ bụ nchekwa nke ike n'ime mmadụ ọ bụla a ga-enweta n'ọfụma "(Gilmore nd).
Chọọchị Setan na-emegide ma na-elelị Iso Christianityzọ Kraịst maka igbochi ọdịdị anụ ahụ, nke anụmanụ na agụụ site na ịkọ ha dị ka ndị mmehie. Site n'echiche nke ụka, nke a na-eme ka Iso Christianityzọ Kraịst bụrụ onye ọchịchị aka ike, nke na-achịkwa ọchịchị. Na mgbakwunye na nkwupụta okwu ya na-emegide ụka ndị guzosiri ike, Chọọchị Setan na-achọ ka ụtụ isi siri ike nke onyinye nye ụka niile. N’ime “nkwenkwe nkwenkwe okpukpe, ụka gbanwere ụkpụrụ ọdịnala Ndị Kraịst, dị ka mgbochi mmekọahụ, mpako na ịba ọgaranya, ma bulie ihe ndị na-emegide ha, dị ka imebiga ihe ókè, nkwupụta onwe onye, ​​na nnwere onwe inwe mmekọahụ, dị ka omume ọma nke Setan. Site na echiche LaVeyan, ebe ọ bụ na mmadụ mmadụ na ndụ mmadụ bụ ihe kachasị mkpa, ha bụkwa ihe niile dị nsọ na naanị ndị ọrụ nwere ike ịgbapụta.
Usoro ngosiputa mmekorita nke Nzuko nke Setan buru ibu karie imegide ulo akwukwo. Chọọchị na-akwado nnupụisi na ikike niile nke na-egbochi ngosipụta nke ikike onwe onye na izi ezi. Ndị mmadụ n'otu n'otu, ndị ekwensu a kwenyere, na-ebelata usoro mmekọrịta na mmekọrịta na-adịghị mma nke na-egbochi echiche onwe onye. Maka ndị LaVeyan Satanist, ọdịmma onwe onye ọ bụla kwesiri ibuli elu karịa ịkwado usoro iwu dị iche iche, ndị mmadụ n'otu n'otu kwesịrị itinye mmụọ nke uche, mmetụta uche na nke anụ ahụ ha kpamkpam. Onwere ihe ekpomoku ndi Darwin diri na “akwukwo okpukpe” nke ulo uka a dika o kwadoro ndu nke onye ike ma merie ndi adighi ike; ọ na-emegide ikike na oke nha anya mmadụ niile. Ndị otu na-ewere onwe ha dịka "Ọkachamara Ọbịa."
A na-egosipụta echiche na-ekweghị na Chineke, hedonistic, mgbochi-nhazi, nke onye ọ bụla, na nke nwere ike ime ka ọ pụta ìhè na "Nkwupụta Ekwensu itoolu" (LaVey 1969: 25).
* Setan na-anọchi anya agụụ mmekọahụ, kama ịbụ onye na-enweghị ihe ọ bụ!
* Setan na-anọchite anya ndụ dị mkpa, kama nrọ nrọ ime mmụọ!
* Setan na-anọchite anya amamihe na-adịghị emerụ emerụ, kama ịbụ onye aghụghọ onwe onye!
* Setan na-anọchite anya obiọma n'ebe ndị kwesịrị ya, kama ịhụnanya na-ala n'iyi!
* Setan na-anọchi anya ọbọ, kama ịtụgharị ihu ọzọ!
* Setan na-anọchite anya ọrụ dịịrị ndị na-ahụ maka ọrụ, kama ichegbu onwe ha banyere ọgwụ ndị na-agwọ ọrịa uche!
* Setan na-anọchite anya mmadụ dị ka anụmanụ ọzọ, mgbe ụfọdụ ọ ka mma, na-adịkarị njọ karịa ndị na-aga ụkwụ anọ, bụ ndị, n'ihi "mmụọ ime mmụọ na ọgụgụ isi" ya, aghọọla anụmanụ kachasị njọ!
* Setan na-anọchite anya ihe niile a na-akpọ mmehie, n'ihi na ha nile na-eduga n'inwe agụụ anụ ahụ, nke uche, ma ọ bụ nke anụ ahụ! ● Setan abụrụ ezigbo ezigbo enyi ụka, dịka ọ na-edebe ya n'ahịa niile n'afọ ndị a!
O yiri ka a ga-anabata njedebe nke nnwere onwe onye na imebiga ihe ókè. Onwe nke a ga-egosipụta bụ ezigbo onwe ya. N'ime ndepụta "Mmehie Ọjọọ itoolu," a dọrọ ndị otu aka na ntị megide agwa ndị dị ka nzuzu, ịdị aghụghọ, nduhie onwe onye, ​​na ime ka ìgwè ehi kwekọọ na nke ga-abụ ihe na-egosi na ọ bụghị eziokwu, na enweghị nkwekọrịta nke a na-akwado bụ "anaghị arụpụta ihe- nkwekọ. ” Ọzọkwa, a na-enye ndị otu iwu ọgwụ na ịre ahịa nke ga-emebi echiche na ngosipụta pụrụ iche nke mmadụ. N'ikpeazụ, na "Iwu iri na otu nke Setan,” a dọrọ ndị na-efe ofufe aka na ntị ka ha ghara imerụ ụmụaka, na-egbu anụmanụ na-abụghị mmadụ, na-awakpo ndị ọzọ belụsọ na ha ebula ụzọ buso ha agha. Magus Peter Gilmore (Shankbone 2007) chịkọtara ọnọdụ ụka a n'ụzọ dị otú a: "Mgbe anyị na ndị ọzọ na-emekọ ihe, ụzọ anyị si eme ya bụ na anyị chọrọ inwe nnwere onwe kachasị, yana oke ọrụ n'emebighị ndị mmadụ oke otu o kwere mee. Ya mere, anyị ga-ewepụta iwu ka anyị wee ghara iji oge anyị niile na-agbachitere ókèala anyị, nọrọ n'ụdị ụlọ nchekwa obodo. ”
Na mbido Chọọchị nke akụkọ ihe mere eme nke Setan "Black Mass" ka emere dị ka ụzọ isi gosipụta mmegide megide Iso Christianityzọ Kraịst na okpukpe ndị ọzọ ahaziri. [Foto dị n'aka nri] N'ụzọ doro anya, a haziri ya dị ka mkpọ nke Mass Roman Katọlik, mana ihe atụ ahụ pụtara. Dabere na LaVey, Black Mass na-arụ ọrụ dị ka psychodrama nke a ga-esi gosipụta nkwulu nke cathartic. Ihe omuma nke ndi Kristain putara ihe na uwe ndi akpukpo aru; ngwẹja-akpọ-ọku; otu nwanyị gba ọtọ nke ejiri mee ebe ịchụ-aja; Baptizim, agbamakwụkwọ, na olili ozu, ihe dị n’ime Setan. Ka ụka ahụ guzobere, a kwụsịrị emume ndị a, agbanyeghị na ha gara n'ihu na-esonyere ụka na uche ọha mmadụ. Pentagon na Sigil nke Baphomet (pentagram a na-agbanye aka n'ime gburugburu, na isi ewu n'ime pentagram) na-aga n'ihu ịbụ ihe nnọchianya dị mkpa nke ofufe Setan.
N'etiti ememe okpukpe nke ụka bụ anwansi, nke a ghọtara na ọ bụ ikike ịgbanwe nsonaazụ, nke a na-enweghị ike ịgbanwe site na usoro ndị nkịtị, dịka uche mmadụ si dị (LaVey 1969: 110). E nwere ụzọ abụọ bụ isi anwansi, nke pere mpe na nke ka ukwuu. Enweghị ọdịiche dị n'etiti anwansi "ọcha" na "oji" dịka a na-ekwenye na anwansi bụ ihe okike. Obere anwansi bu usoro eji eme ihe nke na eme ka ndi mmadu megharia ndi ozo. E nwere ụdị atọ: inwe mmekọahụ (nke ebumnobi ya bụ ịrata mmụọ na obi ụtọ), ọmịiko (ebumnuche na-enyere ndị a hụrụ n'anya aka), na mbibi (ebumnobi ịhapụ iwe). Anwansi ka ukwuu na-emetụta ihe omume ndị dị na mpụga site na imepụta ọnọdụ mmetụta uche gabigara ókè nke na-emepụta ogo dị elu nke adrenaline. Ọ bụrụ na ọkwa dị elu, ọhụụ mmadụ banyere ihe mmadụ chọrọ ime ga-abanye n'ime uche amaghị ihe nke onye a na-emetụta. Ọ bụrụ na oge ruru, onye ahụ ga-akpa agwa dịka onye na-achọ ịtụgharị ihe chọrọ (Gilmore nd; Lap 2006).
Chọọchị Setan na-eme ememme dị iche iche n'oge ememme dị iche iche. N'ikwekọ na ntinye aka ya, otu ụbọchị ncheta kachasị mkpa kwa afọ bụ ụbọchị ọmụmụ mmadụ. Ememme a na-egosi ndị òtù na ha bụ chi na ndụ ha. Atọ ndị ọzọ dị mkpa, ma ọ bụghị dị nsọ, ụbọchị ndị e zoro aka na Bible Setan bụ Walpurginsnacht, nke na-agba mabatara mmiri na mmalite nke Chọọchị Setan na 1966; oge okpomọkụ na oyi solstices; na equinox na mmiri na ọdịda. Ndị Setan na-enwere onwe ha ịme ememme omenala ndị ọzọ na nke okpukpe, ma ha na-ejikarị oge ndị ahụ eme ihe.
LaVey na ndị na-eso ụzọ ya mepụtara ihe ngosi dị iche iche iji gosipụta àgwà ya ndị pụrụ iche. N'akwụkwọ akụkọ hagiographic, nne nne La Vey bụ onye gụrụ Transylvania nke mere ka ọ mara mgbaasị mgbe ọ bụ nwata. LaVey gbapụrụ n'ụlọ mgbe ọ dị afọ 16 wee rụọ ọrụ nke ọma na ọrụ dịka onye ọkpụkpọ egwu na San Francisco Ballet Orchestra, circus ọdụm tamer na Clyde Beatty Circus, onye na-ahụ maka ịgba egwu ụlọ, onye na-ahụ maka ịgba egwu ụlọ, na onye uweojii na-ahụ maka ndị uweojii. O kwukwara na ya na Marilyn Monroe na Jayne Mansfield na-enwe mmekọahụ. Otutu ihe ndi ozo di na akuko hagiographic ka emesiri kwue dika ndi nnochite anya akwukwo LaVey na ndi oru nyocha akuko malitere akwukwo akwukwo ihe omuma.
N'agbanyeghi otutu nsogbu di iche iche banyere ndu ya na ndu ya, LaVey duru ndi nzuko nke Setan rue mgbe onwuru ya na 1997. Na mbu, ada LaVey, Karla, kwuputara na ya na onye oru LaVey, Blanche Barton, ga-eje ozi dika ndi isi ndi isi nchu aja. Agbanyeghị, esemokwu gbasara iwu wee gbapụta, nke dugara na nkwekọrịta na-ekwupụta na a ga-ekewa akụ (ihe onwe onye, ​​ihe odide na ụgwọ ndị ga-eso ya) ga-ekewa n'etiti ụmụaka atọ (Zeena, Karla, na Xerxes). Enyere Barton ikike nke ụlọ ọrụ, Chọọchị Setan, ọ nwekwaara onwe ya afọ anọ ka ọ na-akwaga isi ụlọ ụka ahụ na mpaghara Hell's Kitchen na New York City. N’afọ 2001, Barton họpụtara Peter H. Gilmore, onye bụbu onye otu aka ụka nke Kansụl Nine, ka ọ bụrụ Magus. Peggy Nadramia ghọrọ Nnukwu Onye Nchụàjà n’afọ na-eso ya. Karla LaVey mechara hiwe Chọọchị Ekwensu nke Mbụ na San Francisco.
Mmegide ya megide okpukpe etinyere n'agbanyeghị, LaVey kwubiri na ọ dị mkpa ịmalite ụka n'ihi na o chere na ndị mmadụ ga-anọgide na-achọ emume na ofufe nke okpukpe a haziri ahazi. Dị ka LaVey si kwuo ya, "Ndị mmadụ chọrọ ememe, na akara nke ha nwere ike ịchọta na egwuregwu baseball ma ọ bụ ọrụ ụka ma ọ bụ agha, dị ka ugbo ala maka itinye mmetụta uche ha enweghị ike ịtọhapụ ma ọ bụ nwee nghọta n'onwe ha" (Gilmore 2007). O guzobere Churchka nke Setan mgbe otu onye otu Magic Circle tụrụ aro na ụka ga-abụ ụzọ kachasị mma maka ịgbasa echiche ya. Onye mgbasa ozi mgbasa ozi na onye na-akwado ya, Edward Webber gbara ya ume, onye gwara LaVey na "ọ gaghị enwe ego ọ bụla site na nkuzi na ehihie Fraịde maka onyinye… ọ ga-aka mma ịhazi ụdị ụka ma nweta akwụkwọ iwu site na Ọchịchị. nke California… Agwara m Anton n'oge ahụ na ndị nta akụkọ ga-agbanye ihe niile a ma na anyị ga-enweta ọtụtụ aha ”(Schreck na Schreck 1998).
La Vey bu ụzọ hazie ụka n'ime mpaghara, grottoes, nke ụka na-achịkwa. N'oge elu ụka na-ewu ewu, e nwere grottos n'ọtụtụ nnukwu obodo na US Na 1975, LaVey kagburu usoro grotto. Blanche Barton (2003) na-akọwa ihe kpatara mkpebi a dị ka ndị a: “Ka ọ na-erule afọ 1975, ndokwa ọzọ emeela na mmadụ ole na ole na-emegide atụmatụ Setan nke LaVey, bụ ndị nwere mmasị karịa ihe Anton kpọrọ" Phase One Satanism "( ya bu, emume ndi ozo, ikwulu ndi Kraist nihi uzo emebere nke oma) wepuru ha. Site n'omume oke echiche ya, Anton were oke iwe hu ka ihe okike ya na-adaba na "Satan Fan Club," ebe ndi adighi ike, nke kachasi ihe ohuru bu ndi nwere oge na nlebara anya nke ndi na emeputa ihe, otutu ndi otu ekwensu…. LaVey chọrọ ka Churchka nke Ekwensu ya ghọọ ala nke na-arụ ọrụ nke ọma kama ịda n'ime mpako ọha na eze na-aga n'ihu ma ọ bụ na "Satan pen pal club." Nsonaazụ bụ nzukọ na-achịkwawanye nke ọma. Dị ka Peterson (2005: 430) si kwuo, “Taa, Chọọchị Setan bụ nke a na-achịkwa, nke yiri sel ebe a na-enweta ndị mbụ (aha ha) site na dejupụta ndebanye ndebanye aha na ịkwụ otu narị dollar na gọọmentị etiti. Ndị otu n'otu na-enwe mmekọrịta dị ukwuu na nzukọ ahụ ka achọrọ, ọtụtụ ndị otu enwechaghịkwa ihe jikọrọ ya na ụka ma ọ bụ ọbụlagodi grotto mpaghara. ” Ndị grottoes nwere onwe ha ma na-ejidekwa onwe ha. Ọ bụ Kansụl nke Itoolu na-elekọta ụka ahụ. Kansụl ahụ “lebara anya na ihe gbasara nkuzi, ntuziaka niile, yana nlekọta ala nke Dr. LaVey (site na Order nke Trapezoid). Dị ka ndị dị otú a, kansụl ahụ na-echedo ikike nke ihe odide LaVey ma na-eche naanị nkwenkwe na omume ndị otu n'otu mgbe ha na-emegide ọdịmma nke ụka… ”(Peterson (2005: 430).
Chọọchị Setan nwere ụdị mmadụ abụọ: Ndị edere aha na ndị nọ n'ọrụ. Ha abụọ ga-abụ ndị okenye iwu. Aha aha Ndi otu ahu bu ndi debanyere aha ma kwụọ ego a choro; [Foto dị n'aka nri] enweghị ihe ndị ọzọ achọrọ maka ndị otu a. E nwere ogo ise nke ndị otu nọ n'ọrụ, nke dị naanị site na ịkpọ oku. Ugo elu ato bu oru ndi nchu aja ma kwue dika Reverend ma obu “Magister / Magistra” na “Magus / Maga.” Ndị ụkọchukwu na-anọchi anya Chọọchị Setan dị ka ọnụ na-ekwuru ha ma mejupụta òtù na-achị isi, Kansụl nke Itoolu. Chọọchị Setan ejirila ọtụtụ narị puku ndị òtù. Ọ bụ ezie na Bible Satanic nwere ike ree 1,000,000 ma nọgidekwa na-ebipụta ya kemgbe a na-ebipụta ya, ewu ewu na nkà ihe ọmụma adabaghị na ndị otu ụka. Ọbụna atụmatụ kachasị mmesapụ aka abụghị ihe karịrị puku ole na ole na elu nke ọhụụ nke ụka, na atụmatụ ndị ezi uche dị na ha dị ọtụtụ narị na elu ya.
Churchka Setan na onye ndu ya, Anton LaVey, nwere nsogbu dị iche iche. Ndị a gụnyere nkwenye nke akụkọ ihe omimi nke LaVey, mmeri nke ndị na-akwado ya, nguzobe nke otu schismatic, na mmetụta nke ụjọ Setan.
LaVey enwewo ike idebe akụkọ ihe mere eme nke ndụ ya na-enweghị ihe ịma aka kemgbe ihe karịrị afọ iri abụọ ruo mgbe nwa ya nwanyị, Zeena, mebiri mmekọrịta ya na 1990 na onye nta akụkọ nyocha, Lawrence Wright, malitere igwu na ndekọ ọha. Na 1990, Zeena LaVey Schreck hapụrụ "nna nna ya," gbara arụkwaghịm na Chọọchị Setan, wee wakpo akụkọ akụkọ Blanche Barton nke LaVey, Ndụ Nzuzo nke Onye Iro (1990) dika “ihe omuma nke nzuzu” juputara na “ochicho nke onwe” (Schreck 1990). Di na nwunye ahụ chọtara Sethian Liberation Movement na 2002 nke setịpụrụ ka ebumnuche ya na-enye ndị mmadụ ohere ịme anwansi n'èzí ọnọdụ mmegbu, nke ịrọ òtù ma nyere ndị bụbu ndị otu nzuzo aka (Lamothe-Ramosa nd). N'afọ sochirinụ Lawrence Wright (1991) dere akwụkwọ ekpughere na Rolling Stone nke ahụ mere ka ndị mmadụ ghara ikwe ka ha dị elu n'ihu ndị na-ege ntị.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkọwa niile dị na akụkọ ihe mere eme nke LaVey. Ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị nkatọ kwubiri na ya enweghị agbụrụ Gypsy, ọ dịghị San Francisco Ballet Orchestra n'oge ahụ ọ na-ekwu na ya bụ onye oboist na otu ahụ, ma ọ bụ na ọ nweghị "onye ọrụ nchịkwa obodo" na San Francisco; enweghị ndekọ nke LaVey ịbụ ọdụm ọdụm na Clyde Beatty Circus, LaVey ahụtụbeghị Marilyn Monroe, ma ya fọdụ na ya na ya nwere mmekọrịta; ọ dịghị mgbe ọ gụrụ Criminology na San Francisco City College ma ọ bụ rụọ ọrụ ọ bụla na Ngalaba Ndị uwe ojii San Francisco; LaVey etinyeghị aka na mmepụta nke Rosemary nwa ma ahụtụbeghị onye nduzi ya, Roman Polanski. Nzaghachi nke LaVey maka nbibi nke mmụọ ya dị oke mma mgbe Wright (1991) chere ya ihu: "'Achọghị m ka akụkọ akụkọ ahụ laa,' LaVey gwara m na mkparịta ụka ikpeazụ anyị, mgbe m zutere ụfọdụ n'ime ya ekwekọghị na akụkọ ya. 'Enwere ihe ize ndụ ị ga-eme ka ọtụtụ ndị na-eto eto jiri m ihe nlereanya.' O wutere ya nke ukwuu na achọpụtara m nna ya dị afọ iri asatọ na asaa iji chọpụta ụfọdụ nkọwa nke ndụ LaVey. 'Ọ ga-akara m mma ma e jiri ihe omimi mee ka nzụlite m sie ike. N'ikpeazụ ị chọrọ ka a mata ihe ị bụ ugbu a '. N'oge ọzọ, o nwere ike kwuo eziokwu karịa: "Abụ m onye ụgha helluva. Ọtụtụ n’ime ndụ okenye m, e boro m ebubo ịbụ onye aghụghọ, onye nzuzu, onye aghụghọ. Echere m na nke ahụ na-eme ka m nọrọ nso n'ihe Ekwensu kwesịrị ịbụ, dịka onye ọ bụla… m na-agha ụgha mgbe niile, n'akwụsịghị akwụsị "(LaVey 1998: 101).
Chọọchị Setan chere ọtụtụ nhazigharị nhazi na otu nkewa. Na mgbakwunye na ntọala nke Zeena LaVey Schreck nke Sethian Liberation Movement na nke mbụ Satanic Church site na Karla LaVey, enwere nnukwu nsogbu sitere n'aka Michael Aquino, bụ onye guzobere Templelọ Nsọ nke Set. Aquino duuru ọtụtụ ndị nkwarụ iri na abụọ si na Chọọchị Setan na 1975 chọta oflọ Nsọ nke Set na 1975, na-ekwu maka esemokwu na LaVey maka ire ogo na nkuzi ekweghị na Chineke, dịka Aquino na-akụzi na e nwere chi dị ndụ nke ekwensu, Set. E wezụga nsogbu ndị a, e nwere ọtụtụ ìgwè ndị ọzọ chọrọ ịmegharị ihe na Chọọchị Setan ma ọ bụ mebie nzukọ na ụka (Bromley na Ainsley 1995). Ndị a gụnyere Chọọchị nke Brothermụnna Setan, Universal Church of Man, hoodtù ofmụnna nke Ram, Nwanyị anyị nke Endor, Coven of the Ophite Cultus Satanas, Thee Satanic Orthodox Church of Nethilum Rite, Theic Satanic Church, Kerk du Satan - Magistralis Grotto na Walpurga Abbey, Churchka nke Brothertù Satanmụnna Setan, Ordo Templi Satanas, Iwu nke Black Ram na Shlọ Nsọ nke Nwanyị Nta, na Templelọ Nsọ nke Nepthys. Ọtụtụ n'ime ndị otu a dị obere ma dịkwa mfe.
N'ikpeazụ, n'oge 1980s, egwu egwu nke Setan na-atụfe n'Ebe Ugwu America na Europe, na-ekwu banyere ịdị adị nke netwọk Setan (Bromley 1991; Richardson, Best, na Bromley 1991). Ndi ozo choro itinye aka n'omume di egwu; ebubo kachasị njọ bụ ịmalite ụmụaka, mmejọ ụmụaka, mmepụta azụmahịa nke foto ụmụaka, ịme ihe ike na ọchịchọ ime mmụọ, na ịchụ àjà nke ụmụntakịrị. Mgbe ọ bụla a na-enwe nsogbu ahụ, a na-eme atụmatụ iji emegbu ndị mmadụ na 50,000 kwa afọ, na e nwere ọtụtụ ịsọ mgbu na-emenye ụjọ.
Ndị na-akwado ozizi ụgha nke Setan kwuru na e guzobere Setan na ọkwa anọ, na itinye aka na-amalite na ọkwa dị ala ma mesịa gụ akwụkwọ na ọkwa dị elu. N'ebe kachasị dị ala bụ "ndị ọkpụkpụ," bụ ndị na-eto eto bụ ndị a na-araba n'ime Satanism site na nchọpụta na egwu dị egwu na egwuregwu efu n'egwuregwu Setan. Ihe ka njọ bụ "ndị satanist onwe ha" bụ ndị na-eme ihe nkiri Setan na-eme ihe megidere mmekọrịta ọha na eze ma chee na ha bụ ndị òtù ọjọọ nke Setan. Ihu ihu ọha nke okpukpe Setan "na-ahazi satanists," nke na-agụnye ụka Setan, nke na-etinye aka na ofufe Setan. Icheta ụdị ọrụ Setan nile bụ "ndị satanist omenala," bụ ndị a haziri ka ha bụrụ mba ụwa, nzuzo, nke a na-ahazi n'usoro nlekọta, na-ahazi usoro mgbasa ozi nzuzo nke na-etinye aka n'omume na ịchụ ụmụaka.
Chọọchị Setan, nke e nyere ọhaneze ọhaneze, na-ekwupụtakarị ndị na-akwado nkata ọjọọ nke Setan dị ka ihe akaebe na enwere ndị na-efe ekwensu dị mfe nghọta. Ndị isi chọọchị pụtara ọtụtụ ihe ngosi televishọn iji gbalịsie ike ịmata ọdịiche dị n'etiti ofufe Setan na ofufe nzuzo ndị a sị na ha bụ nke Setan. N'agbanyeghị ihe nchebe nke ndị na-ekwuchitere Chọọchị Setan na-ekwu, e mebisiri ihe ịma aka a n'ụzọ bụ isi site na ọdịda nke ihe a na-akpọ “egwu Setan.” Ndị ọkachamara na ndị gọọmentị gbara aka na izi ezi nke ihe ncheta echetara echekwa nke ndị na-azọrọ na-enye, ọ nweghị ihe akaebe anụ ahụ gosipụtara iji kwadoo ebubo, a gbanwere ikpe ụlọ ikpe, na nyocha gọọmentị America na Europe kwubiri na ebubo ịgba izu enweghị ntọala (Hicks 1994; La Fontaine 1994 ; Agbanye 1989).
Barton, Blanche. 2003. Chọọchị Setan: Akụkọ Nkọwa. Nweta site na http://www.churchofsatan.com/Pages/CShistory7LR.html on 28 July 2012.
Blanche Barton. 1990. Ndụ Nzuzo nke Onye Na - emegide Setan: Akwụkwọ E Dere n'Aka Anton LaVey. Port Townsend, WA: Ezigbo Ụlọ.
Boulware, Jack. "Ekwensu nke Oge: Olee otú Chọọchị Setan Si Nweta? Ọ Bụghị Ọkụ. ” The Washington Post 30 Ọgọst 1998: F1.
Bromley, David. 1991. "Okpukpe Setan: Ọgba Ọgba Ọhụrụ." Pp. 49-74 na Okpukpe Setan, nke James Richardson dere, Joel Best, na David Bromley. Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter.
Bromley, David G., na Susan Ainsley. 1995. "Nkpukpe Setan na Uche nke Setan: Contemporary Incarnations." Pp. 401-09 na Okpukpe Ndị Ọzọ nke America , nke Timothy Miller dere. Albany: University University nke New York.
Gilmore, Peter. 2007. "Gịnị, Ekwensu?" E nwetara site na http://www.churchofsatan.com/Pages/WhatTheDevil.html na 29 July 2012.
Gilmore, Peter. Nd “Okpukpe Setan: Okpukpe Na-atụ Egwu.” Nweta site na http://www.churchofsatan.com/Pages/Feared.html na 27 July 2012.
Hicks, Robert. 1991. Na-achọ Setan: Ndị uweojii na Anwansi. Buffalo, NY, 1991.
Mara, George. 2005. “Okpukpe Setan.” Nweta site na http://www.controverscial.com/Satanism%20-%20Anton%20LaVay.htm na 1 August 2012.
La Fontaine, Jean. 1994. Ogologo na ọdịdị nke nd ị na-eme ihe ike: Nchọpụta na Nchọpụta. London: Majlọ Ọrụ Ọfịs Eke nke Majdị ebube ya.
Lattin, Don. 1999. "Den Satan na Nnukwu Mmebi: Ndị ikwu nke SF hellhound Anton LaVey na-alụ ọgụ maka" Black House '. San Francisco Chronicle 25 January 1999. Nweta site na http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=%2Fchronicle%2Farchive%2F1999%2F01%2F25%2FMN77329.DTL na 1 August 2012.
Lamothe-Ramos, Annette. nd “Nwa nwanyi Beelzebub: Otu Zeena Schreck siri gbapuo nzuko nke Setan.” Nweta site na http://www.vice.com/en_uk/read/beelzebubs-daughter-0000175-v19n4?Contentpage=-1 na 1 August 2012.
Lap, Amina. 2008. "Nhazi nke Okpukpe Setan nke Oge A-Nnyocha nke Oge Ochie LaVey." Nweta site na http://blog.blazingangles.net/soapbox/images/Categorization-of-Modern-Satanism.pdf na 28 July 2012.
Lanning, Kenneth. 1989. "Mpụ nke Ekwensu, Anwansi, Ritualistic Mpụ: Iwu Iwu Mmanye." Onye uwe ojii LVI: 62-83.
LaVey, Anton. 1998. Setan na-ekwu. Port Townsend, WA: Ezigbo Ụlọ.
LaVey, Anton. 1992. Akwụkwọ Ekwensu ji ede ihe. Port Townsend, WA: Felọ Feral.
LaVey, Anton. 1972. Oge Ekwensu. New York: Akwụkwọ Avon.
LaVey, Anton. 1971. The Witch Witch, ma ọ bụ, Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na omume ọma adaa. New York: Dodd, Mead.
Peterson, Jesper. 2005. "Okpukpe Setan nke Oge A: Ozizi Ọchịchịrị na Ọkụ Na-acha Ọkụ." Pp. 423-57 na Okpukpe ọhụrụ, nke James Lewis na Jesper Petersen dere. New York: Oxford University Press.
Rand, Ana. 1957. Atlas Shrugged. New York: Ụlọ na-adịghị mma.
Raymond, John. 1998. “Amaokwu Setan; Otú Otu Nwoke Si Nyere Aka Wepụta Chọọchị Setan n'Elu Ala. ” SF kwa izu. 1 July 1998. Nweta site na http://www.sfweekly.com/1998-07-01/calendar/the-satanic-verses/ na 1 August 2012.
Redbeard, Egwu. 1996. Enwere ike. Chicago: MHP & Co., Ltd.
Richardson, James, Joel Best na David Bromley. 1991. Okpukpe Setan. Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter.
Schreck, Zeena. 1990. "Akwụkwọ Ozi Michael Aquino." 30 Disemba 1990. Nweta site na http://www.skeptictank.org/files/mys5/zeena.htm
Schreck, Zeena na Nikolas Schreck. 1998. Anton LaVey: Ụgha na Eziokwu. Nweta site na http://satanismcentral.com/aslv.html on 29 July 2012.
Shankbone, David. 2007. "Nkpukpe Setan: N'ajụjụ ọnụ a na-agba ya na Chọọchị Nnukwu Onye Nchụàjà bụ Peter Gilmore." Wikinews 5 November 2007. Nweta site na http://en.wikinews.org/wiki/Satanism:_An_interview_with_Church_of_Satan_High_Priest_Peter_Gilmore na 1 August 2012.
Wright, Lawrence. 1991. “Ọmịiko maka Ekwensu: Ọ Dịghị Mfe Ọjọọ n'awa nke Gara Hel.” Rolling Stone 612:63-68, 105-106.